Gällivare waxeey jirtaa 10 maayl dhanka waqooyiga wareega cirifka. Degmada waxaa dagan in dhafeeyso 18 000 oo qof ayadoo meesha dhawaanaansho uu leh shaqo, adeegyada iyo dabiicada. Halkaan waxaa ku yaalo isbitaal, xaneeyn caruur si fiican uu dhisan, dugsiyaal fiican, ururo badan iyo soo bandhigid dhaqamed oo kala duwan. Ganacsiga kala duwan markii laga tago, macdan soo saarka ayaa ilaa tobanaan sano ah waa dhaq-dhaqaaqa ganacsi e koobaad. Halkaan waxaa ka socdo badaladi-bulshadeed ee ugu weeyn dalka. Guriyaal cusub oo gaaraayo weeyninkooda 250 000 mitirka labajibaaran, hoowlo degmo iyo meelo ganacsi ayaa la dhisi doonaa 20 sano ee soo socdo.
Bartamaha Gällivare waxaa ku yaalo dukaamo, hey’adda socdalka, qasnada ceeymiska, xafiiska shaqada, xafiiska canshuuraha, goobta-dabaasha iyo maktabad. Dukaamana waxeey ku yaaliin 1 kilomitir dhanka waqooyiga ee Gällivare (ICA, COOP iyo kuwo kale), basas waxeey ka baxaan bartamaha Gällivare.
Gällivare waxaa ku taalo dugsiyaalo hoose oo badan oo looguna tala galay fasalka 1-9aad. Dugsiga sare waxuu xooga saaraa farsmada casriga, ardayda iyo macalimiinta dhamaantod waxeey heleyaan kombiyuutaro gaar ah oo loo isticmaali karo shaqo-iskuuleed. Sido kale ardayda dhamaantood waxeey fursad uu lee yihiin in ee akhriyaan koorsooyinka la iskaga rabo haboonaanshaha-jaamacada.
Shaqo dhiibe weeyn Gällivare waxaa ka ah xafiiska degmada Gällivare, LKAB, Boliden iyo maamulka gobolka caafimadka ee Norrbotten. Gällivare waxeey lee dahay shirkado yar oo badan, kana howl galo farsamada, godadka macdanta lago soo saaro iyo adeegyada.
Kock till Stora Sjöfallet , Gällivare Kock, à la carte
Mättekniker Gällivare / Kiruna / Jokkmokk Mättekniker, fysik
Utesäljare för blommor Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Sjuksköterskor sökes till Gällivare Sjuksköterska, grundutbildad
Servicetekniker Servicetekniker, maskin
Pizzabagare Pizzeria Dylan AB Pizzabagare
Säljare med Logistikansvar Vikariat 75% , Gällivare Butikssäljare, fackhandel
Säljare Tillfällig Anställning 50% , Gällivare Butikssäljare, fackhandel
Personlig assistent till 23 årig tjej Personlig assistent
Personlig assistent till 23 årig ung tjej Personlig assistent
Söker kvinnlig assistent till 23 - årig aktiv tjej Personlig assistent
Förskollärare till Tallbackaskolan Lärare i förskoleklass
Resurspedagoger till Tallbackaskolan Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Musiklärare till Tallbackaskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Undersköterska till hemtjänsten Nära Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Väktare till Gällivare Väktare
Fysioterapeut / sjukgymnast till Länsenheten särskilt stöd / funktionshinder Fysioterapeut/Sjukgymnast
ca 18 300
Kiruna 100 km
Luleå 250 km
Stockholm 1200 km